Wariyihii GUNDHIG, Dige oo la wareegay Warfaafinta V. Somalia | KEYDMEDIA ENGLISH
Wariyihii GUNDHIG, Dige oo la wareegay Warfaafinta V. Somalia
Xogo ay Keydmedia faafisay isbuucii hore [25 May 2022] ayaa hirgalay, Xasan Sheekh, ayaana Madaxtooyada ka xaaqay haraadigii Farmaajo, kuwaas oo mushkiladda siyaasadeed ee dalka qeyb ka ahaa sanadihii la soo dhaafay.
MUQDISHO, Soomaaliya – Sida ay Keydmedia Online baahisay lix cisho ka hor, Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa xilka Agaasimaha Warfaafinta iyo Xiriirka Warbaahinta Madaxtooyada Qaranka, ka raacdeeyay, Cabdirishiid Maxamed Xaashi, oo ka mid ahaa shaqsiyaadkii laf-dhabarta u ahaa kooxdii iclaamka u qaabilsaneyd Farmaajo.
KON, ayaa ahayd, warbaahintii ugu horreeyay ee 25 May 2022 baahisa in xilkaas loo magacaabayo Cabdulqaadir Cali Dige, oo ahaa Wariyihii GUNDHIG, kaasoo caan ku ahaa sameynta warbixinno iyo barnaamijyo looga soo hor jeeday maamulkii Farmaajo, fadhigiisuna ahaa dalka Mareykanka, inkastuu wax ku bartay dalka Yemen.
Lix cisho kadib, baahintii KON, Dige, ayaa xalay la wareegay xafiiska Agaasimaha Warfaafinta iyo Xiriirka Warbaahinta Madaxtooyada, kaasoo shaqadiisu tahay, haqabtirka baahiyaha xogeed ee Shacabka Soomaaliyeed ee dhanka dowladda, gaar ahaan qalcadda dalka looga arrimo ee Madaxtooyada iyo xafiiska Madaxweynaha.
Dhanka kale, isla taariikhdaas, KON, waxay baahisay in Afhayeenka Madaxtooyada loo magacaabayo Cabdikariin Cali Kaar, kaasoo isna hadda si buuxda u shaqo billaabay, wareysigiisii 1-aad-na siiyay Warbaahinta Qaranka, waxaana xusid mudan in Kaar, hore u soo noqday Guddoomiyaha degmada Howlwadaag ee Gobolka Banaadir.
Talaabadaan ayaa ku xigtay, is-baddel lagu sameeyay hoggaanka Guud ee Madaxtooyada, maadaama, Agaasimaha Guud, loo magacaabay, Xuseen Sheekh Maxamuud, oo aad ugu dhow Madaxweynaha cusub, halka Agaasime Ku-Xigeenka Guud ee Madaxtooyada, laga dhigay Maxamed Amiin Sheekh Cusmaan oo UPD ka tirsan.
Cabdulqaadir Cali Dige, oo ah nin dhallinyaro ah, ayaa isha lagu haya sida uu u maamulo Warbaahinta Madxtooyada, oo shantii sano ee la soo dhaafay aan wax xiriir ah la lahayn inta badan warbaahinta Madaxa-bannaan, iyadoo ay xusid mudan tahay inu durba soo bandhigay qorsheyaasha ku aaddan horumarinta Warfaafinta.
Dige, waxyaabaha uu ku dhaliili jiray maamulkii Farmaajo waxaa qeyb ka ahaa, hab-dhaqankoodii ku aaddanaa, sida ay ula macaamili jireen warbaahinta Madaxa bannaan iyo in xafiiska uu hadda la wareegay uu waqti badan galiyay abuuridda dhallinyaro baraha bulshada ku difaacda Farmaajo, xujooyin cadcad ayaa isaga hadda hor-yaalla.